“ ကျနော်က ချန်ပီယံလိဂ် ကစားခွင့် ရတဲ့အကြိမ်တိုင်း ရှုံးထွက်အဆင့်ကို ရောက်အောင် စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့သလို ၊ ယူရိုပါလိဂ် ကစားခွင့်ရတဲ့2ကြိမ်မှာတော့2ကြိမ်စလုံး ဖလားကို ဆွတ်ခူးပေးခဲ့တာပါ” မော်ရင်ဟို | Football Myanmar
“ ကျနော်က ချန်ပီယံလိဂ် ကစားခွင့် ရတဲ့အကြိမ်တိုင်း ရှုံးထွက်အဆင့်ကို ရောက်အောင် စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့သလို ၊ ယူရိုပါလိဂ် ကစားခွင့်ရတဲ့2ကြိမ်မှာတော့2ကြိမ်စလုံး ဖလားကို ဆွတ်ခူးပေးခဲ့တာပါ” မော်ရင်ဟို
November 28, 2018 Adam Willian	38 Comments
ယူနိုက်တက် အသင်းရဲ့ နည်းပြ မော်ရင်ဟို ကတော့ သူ့အပေါ်ကို ယုံကြည်မှု အပြည့်နဲ့ အားပေးခဲ့ကြတဲ့ ပရိသတ်တွေကို ကျေးဇူးတင်တဲ့ အကြောင်း ပြောဆို သွားခဲ့သလို ၊ သူ့ရဲ့ နည်းပြဘ၀မှာ ရှုံးထွက်အဆင့်ကို တက်ရောက်အောင် စွမ်းဆောင် ပြနိုင်ခဲ့တာက ဒီတစ်ကြိမ် အပါအ၀င် 14 ကြိမ်မြောက် ဖြစ်တယ်လို့ ရှင်းပြသွားခဲ့ပြီး ၊ အုပ်စု အဆင့်ကို မကျော်နိုင်ခဲ့တဲ့2ရာသီမှာလဲ ယူရိုပါလိဂ် ဖလား2လုံးကို ရယူပေးခဲ့တယ်လို့ မှတ်ချက် ပေးသွားခဲ့ ပါတယ်။
မနေ့ညက ကစားခဲ့တဲ့ ယမ်းဘွိုင်းနဲ့ ပွဲစဉ်မှာတော့ ယူနိုက်ဟာ ခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ ကစားခဲ့ရပြီး ၊ ရှုံးထွက် အဆင့်ကို တက်ရောက်ဖို့ သေချာစေမယ့် သွင်းဂိုးကို ပွဲပြီးခါနီးမှ ဖယ်လိုင်နီက ဖယ်လိုင်နီက သွင်းယူ သွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ ဂိုး မသွင်းယူနိုင်ခင် အထိ သူ့စိတ်ထဲမှာ အသင်းရဲ့ ကစားပုံကို တော်တော်လေး အားမရ ဖြစ်ခဲ့မိပေမယ့် ၊ ဂိုးသွင်းပြီး နောက်မှာတော့ စိတ်သက်သာရာ ရခဲ့တဲ့ အကြောင်းကိုလဲ အခုလို ထုတ်ဖော် ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ်။
ပွဲ အပြီး သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ မှာတော့ မော်ရင်ဟိုက “ ဂိုးမသွင်း နိုင်ခင်အထိတော့ တော်တော်လေးကို စိတ်ပျက်မိပါတယ် ၊ ဒါပေမယ့် ဂိုးရပြီး နောက်ပိုင်းမှာတော့ စိတ်သက်သာရာ ရခဲ့တာပေါ့ ။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ ကျနော်တို့ဟာ ဒီပွဲကို သရေမှန်းပြီး ကစားခဲ့တာ မဟုတ်သလို ၊ 0-0 ရလာဒ် အတွက်ပဲ ကစားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အိမ်ကွင်းမှာ ကစားခွင့် ရရဲ့ သားနဲ့ အုပ်စု နောက်ဆုံး ပွဲအထိ ရင်ခုန်နေရမယ့် ကိုယ့်ဒုက္ခမျိုးကို မလိုချင်ဘူးလေ ။
စိတ်ပျက်မိတဲ့ အကြောင်းအရင်းက ကစားသမားတွေရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကြောင့်တော့ မဟုတ်ပါဘူး ။ ကျနော်တို့ ဂိုးမသွင်းနိုင်ပဲ ဖြစ်နေခဲ့တာကြောင့်ပါ ။ နောက်ဆုံးတော့ ကျနော့် ကစားသမားတွေဟာ ရှိသမျှ ကာယအား ၊ ညာဏအားတွေ သုံးပြီး ကစားပေးခဲ့လို့ နိုင်ပွဲလဲ ရခဲ့သလို ၊ သူတို့လဲ တော်တော်လေး ပင်ပန်းသွားကြမယ် ထင်ပါတယ်။
ဒီပွဲမှာ ထူးထူးခြားခြား ဖော်ပြချင်တဲ့ အချက်တစ်ချက် ကတော့ ဒီဂီယာ ရဲ့ ဂိုးပေါက် ကာကွယ်လိုက်တဲ့ အခိုက်အတန့်ပါ ။ သူသာ မကာကွယ် နိုင်ခဲ့ဘူး ဆိုရင် ကျနော်တို့လဲ အနိုင်ဂိုးကို သွင်းယူ နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အခုတော့ အုပ်စုကျပ် တစ်ခုကနေ လွတ်မြောက်ခဲ့ပြီ ဖြစ်သလို ၊ ပေးဆပ်မှုတွေကလဲ တော်တော်လေး များခဲ့ ပါတယ်” လို့ ထုတ်ဖော် ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီး ဒီဂီယာ ရဲ့ စာချုပ်သစ် အနေအထားနဲ့ ပတ်သက်လို့ မေးမြန်း ရာမှာတော့ မော်ရင်ဟို က “ ဒီဂီယာ ဟာ ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ ဂိုးသမား တစ်ယောက်ပါ ။ အကောင်းဆုံး ဂိုးသမား လို့ပြောရင်လဲ ရပါတယ်။ ကျနော်တို့ ကလပ် အနေနဲ့ ဆုဖလားတွေကို စိန်ခေါ်ချင်တဲ့ အသင်းတစ်သင်း အဖြစ် တည်ဆောက်မယ် ဆိုရင် အကောင်းဆုံး ဂိုးသမား တစ်ယောက်တော့ လိုအပ်နေမှာ အသေအချာပါပဲ။
ပြီးတော့ သူဟာ အသင်းမှာ ဆက်နေချင်တယ် ဆိုတာ ကျနော် ကောင်းကောင်း သိသလို ၊ လက်ရှိ ကစားသမားတွေ နဲ့ အတူတူ လက်တွဲပြီး အောင်မြင်မှု ရှာဖွေဖို့ ဆန္ဒပြင်းပြ နေတယ်ဆိုတာ သိထားပြီးသားပါလို့” တုန့်ပြန် သွားခဲ့ ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် သူ့အပေါ်ကို ယုံကြည်မှု အပြည့်နဲ့ အားပေးနေကြတဲ့ ပရိသတ်တွေကိုတော့ မော်ရင်ဟိုက “ ပထမဆုံး အနေနဲ့ အရမ်းကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျနော့် နည်းပြဘ၀ တစ်လျှောက်မှာ ချန်ပီယံလိဂ် ပြိုင်ပွဲကို 14 ကြိမ် ပါဝင် ကစားခဲ့ပြီး ၊ 14 ကြိမ် စလုံး ရှုံးထွက် အဆင့်ကို တက်ရောက်အောင် စွမ်းဆောင် ပြနိုင်ခဲ့တာပါ။ ကျန်တဲ့2ကြိမ် မှာတော့ ယူရို ပါလိဂ် ပြိုင်ပွဲသာ ကစားခွင့် ရခဲ့ပေမယ့် နှစ်ကြိမ် စလုံး အဲဒီဖလားကို ရရှိအောင် စွမ်းဆောင်ပေး နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါက ကျနော့် အပေါ် ယုံကြည်ပေးထားတဲ့ သူတွေကို သိထားစေချင်တဲ့ အကြောင်း အရာလေး တစ်ခုပါ။ အခု ရှုံးထွက် အဆင့်ကို တက်ရောက် နိုင်ခဲ့တာကလဲ ကြီးမားတဲ့ အောင်မြင်မှုလို့ ဆိုလို့ မရပေမယ့် ၊ အတိုင်းအတာ တစ်ခုထိတော့ ကျေနပ်စရာ တစ်ခု ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်” လို့ ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ်။
Previous Postယူနိုက်တက် ပရိသတ်တွေ အတွက် သတင်းကောင်း တစ်ခု ပြောကြား သွားတဲ့ #မော်ရင်ဟိုNext Postရှုံးထွက် အဆင့်ကို တက်ရောက်နိုင်ခြင်း မရှိခဲ့ပါက ၊ ပေးဆပ်မှုတွေ ကြီးမားလာနိုင်တဲ့ PSG
38 thoughts on ““ ကျနော်က ချန်ပီယံလိဂ် ကစားခွင့် ရတဲ့အကြိမ်တိုင်း ရှုံးထွက်အဆင့်ကို ရောက်အောင် စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့သလို ၊ ယူရိုပါလိဂ် ကစားခွင့်ရတဲ့2ကြိမ်မှာတော့2ကြိမ်စလုံး ဖလားကို ဆွတ်ခူးပေးခဲ့တာပါ” မော်ရင်ဟို”
Sunday Delivery Flowers says:
However the explosion of interest in seasonal and pesticide-free meals tilled in native soil is now spilling over into the commercial flower trade, making it attainable to go native, even in the middle of winter.
a515 order viagra 25 mg
Hi friends, its fantastic article regarding tutoringand fully defined, keep it up all the time.
I do believe all of the concepts you have offered on your post. They are really convincing and will certainly work. Still, the posts are too short for novices. Could you please extend themabit from subsequent time? Thank you for the post.
Statistics show thatacompatible relationship that you meet online always lasts for long, compare withaFrench date you meet at the bars or nightclubs. When your ex is courting another person, it may be an extremely demanding time. This is how you actually start learning things about her